Mahavelona Ankazobe : nahatrarana basy Mas 36 ilay jiolahy maty voatifitra | NewsMada
Mahavelona Ankazobe : nahatrarana basy Mas 36 ilay jiolahy maty voatifitra
Maty voatifitra nandritra ny fifandonana tamin’ny zandary ny iray tamin’ireo jiolahy telo saika hanao fanafihana, tao Mahavelona Ankazobe, afakomaly maraina. Tavela niaraka taminy ny basy Mas 36 sy bala maromaro. Fitaovam-piadiana fampiasan’ny mpitandro filaminana.
Afakomaly maraina, nifanehitra tamin’ny zandary nanao fisafoana ny telo lahy saika hanafika tany Mahavelona Ankazobe, ka nitsoaka ireo raha vao nahita ny mpitandro filaminana. Rehefa nenjehina ireo olona ireo, nitifitra avy hatrany. Nampandre ny fokonolona teny amin’ny manodidina ny zandary ka raikitra ny fifanenjehana. Tsy nitsahatra nitifitra ireto jiolahy ka olona iray tamin’ny fokonolona voatifitra. Nanomboka teo, nifandona ny zandary sy iretsy telo lahy ka voatifitra ny iray tamin’ireto farany. Maty tsy tra-drano izy io ka tavela teo niaraka tamin’ny basy Mas 36 sy bala maromaro.
Araka ny fanazavana avy amin’ny zandary, efa nisy ny vaovao azo fa misy jiolahy mihaodihaody any Mahavelona, ary mitondra basy Mas 36 ireo. Izao sendra ny zandary izao izy telo lahy voalaza fa nikasa hanafika ary niafara tamin’ny fifandonana. Nitohy ny fikarohana hatramin’ny omaly, saingy mbola tsy hita ny roa lahy tafatsoaka. Voalaza fa ao anatin’ny hetsika ataon’ny zandary ny fisafoana tahaka ity tany Mahavelona ity, sy ny fandraisana andraikitra raha vao misy ny vaovao voaray avy amin’ny fokonolona.
Lehilahy nahatrarana bala marobe
Lehilahy iray ihany koa nahatrarana bala marobe tany aminy, tany Midongy Atsimo, ny talata lasa teo. Araka ny fanazavan’ny zandary, raha vao nahita ny zandary mpisava eny amin’ny lalam-pirenena izy io, avy dia nitsoaka. Nanenjika ny zandary ka tratra ihany izy io. Rehefa nosavaina ny sakaosy teny aminy, nahitana bala calibre 12 miisa 50, calibre 16 miisa 126 ary bala 6,35mm miisa dimy. Nandritra ny fanadihadiana azy no nahalalana fa avy any Farafangana izy io, ary hivarotra ireo bala ireo any Midongy Atsimo. Any amin’ity toerana ity, izay mbola manjaka ny asan-dahalo, ary heverina fa nokasaina amidy amin’ny dahalo ireo bala ireo kanjo sarona.
Maneho ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana sy ny bala eto amintsika ireto tranga roa ireto. Basina mpitandro filaminana izao ilay Mas 36 voalaza etsy ambony. Mety avy any amin’ny mpitandro filaminana izany? Ny famotorana manodidina izany izay manjavozavo hatrany ary tsy tonga hatramin’ny farany. Anisan’ny antony mahatonga ny olona tsy hahatoky ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny fiparitahan’izy ireo. Tsy mahagaga raha miseho lany ny fitsaram-bahoaka eto amintsika. Loza mitatao eo amin’ny fiaraha-monina ny fiparitahan’ny basy sy ny bala ary ny fitsaram-bahoaka. Aiza ho aiza ilay fandriampahalemana dradradradrain’ny fitondrana?